Xaqa in aan lagugu takoorin meesha aad ka shaqaysid | Dina Rättigheter
Xaqa in aan lagugu takoorin meesha aad ka shaqaysid
Waxa aad xaq u leedahay in aad heshid mushaharkaaga waqtigiisa.
Waxaa jira qaanuun oranaya in aadan shaqayn karin shan saacadood ka badan nasasho la`aan Labadii maalmood ee shaqo ah waa in ay u dhaxaysaa 11 saacadood oo nasniin ah.Qanuunka waxaa lagu magacaabaa Arbetstidslagen.
Waxaa lama huraan ah in madaxa shaqada ka war qabo in aad haysatid bay´ad shaqo oo fiican.
Waxa aad xaq u leedahay in aad ka nabadgeshid dhamaan noocyada takoorida iyo dhibaataynta.
Waxaa lama huraan ah in madaxda sexeexaya heshiiska shaqada in ay ku siiyaan xuquuqdaada iyo mushahaarka ku cad heshiiska wadajirka ah.
Madaxa shaqada kuma “deymin “(diri) karaan madaxda kale ama shaqooyinkale adoon raali ka ahayn.
Waxaad qabanaysaa keliya shaqadii aad ku heshiiseen bilawgii. Tusaale ahaan madaxa sahqada kaama dalban karo waxyaalo galmo ku lugl eh.
Dalka Iswiidhan waa sharci daro in madax shaqda uu shaqaalaysiiyo dadka aan sharciga shaqda haysan. Sidoo kale waxaa sharci daro ah in dadka aan sharciga shaqada haysan ay shaqeeyaan. Laakin haddii aad xitaa sharciga shaqada la`aanti aad shaqaysid waxaad leedahay xuquuq. Marwalba waa in la raaco xeeraka suuqashaqada u yaal,xitaa kuwa shaqaalysiiya dadka aan sharciga/waraaqaha haysan.
Iswiidhan waxaa ka jira “xuriyada ururada´´ taas oo micneheedu yahay in aad xaq u leedahay in aad ka mid noqtid ururada. Ururadu waxa ay xaq u leeyihiin in xoriyad u shaqeeyaan. Waxaa jira ururo shaqaale oo kala duwan oo aad la xiriiri kartid haddii laguugu gaysto mesha aad ka shaqaynaysid dhibaatooyin,takoorid,qasbid(xoog)ama hadidaad xoog ku lug leh ama aad qabtid su`aalo ku saabsan xuquuqdaada meesha shaqadaada.
Talobixin, taagero iyo warbixin ku shaqo leh xaqa shaqada oo bilaash ah.
SAC i Göteborg 031 711 96 08
Fackligt center för papperslösa 020 1601006
Göteborgs Rättighetscenter 031 7884460, waqtiyada taleefoonka talaado kasta saacadaha 13.30-16.30 waqtiyada kale waanu qabanaa taleefoonka hadii aanu awoodno. Waxaad kaloo ku duubi kartaa taleefoonka fariin.
SAC i Stockholm 08 6586269, dheh inaad rabtid in aad la hadashid qof ka mid ah dadka diwaangelinta ka shaqeeya kaas oo ah SAC dadka aan sharciga/waraaqaha haysan
Laga bilaabo bisha juulaay sanadka 2013 waxa ay xaq u leeyhiin dhamaan caruurta degan dalka Iswiidhan in ay iskuul aadaan, xitaa ku aan sharciga lahay.ilaa bishii juulaay sanadkii 2012 caruurta dalka Iswiidhan xaq uma aysan lahay in iskuul aadaan. Iskuulo badan maamulayaashooda ayaa sii dayn jiray caruurta aan sharciga lahayn iyaga oo skuuldaas la xiriirin waaxda socdaalka ama booliska. Caruurta dadka magangelyo doonka ah iyo kuwa sababo kale dartood u raadinaya sharciga degnaanshaha, waxa ay xaq u leeyhiin in ay iskuul aadaan.